January 21, 2021 - Babal Khabar
Jan212021 by बबाल खबरNo Comments
पाकेको केरालाई पेस्ट बनाएर अनुहारमा दल्नुहोस र आधा घन्टापछि मन तातो पानीले अनुहार धुदा अनुहारमा निखार आउनुका साथै चा'उरी पर्नबाट जोगाउँछ । जुन पायो त्यही साबुनले मुख धुँदा अनुहारमा चाउरी पर्छ । तसर्थ राम्रो फेसवासले मुख धुनुपर्छ । दुई चम्चा मह र चार चम्चा पाउडर दुधलाई मनतातो पानीमा मिसाउने र यो पेस्टलाई अनुहारमा दल्ने । दश मिनेटपछि अनुहार धुँदा अनुहारको छाला'मा निखा'रता आउनुका साथै छाला कसिलो हुन्छ । घ्युकुमारीको रस निकालेर निमित अनुहारमा दल्नुहोस् । यसमा हुने विशेष प्रकारको एसि'डले अनुहारको छालाको कोषलाई बलियो बनाउँछ र समयमै च्या'उरी पर्न वा धो'ल्लो हुनबाट बचाउछ । ' एक टुक्रा अदुवालाई मसिनो गरी पिस्नुहोस र त्यसमा एक चम्चा मह मिसाएर बिहान र बेलुका खानुहोस् । यसले अनुहारको छा'लाको कसि'लो बनाउने कोले'जेसनलाई टुट्न'बाट बचाउँछ । यसले अनुहा'रमा ध'र्सा आउन र छला झोल्लि' नबाट ज
काठमाडौं, ६ माघ । प्रति नि'धिसभा वि'टनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि नेपाल प्र'हरीले म्यादी प्र'हरीमा भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले करिब १ लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म्या'दी प्र'हरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि प्र'हरीले बजेटको मा गसहितको सुर'क्षा योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुर'क्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्र'ह'रीको आवश्यक संख्या र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन सहित सुरक्षा योजना लगायतका प्राविधिक विषयमा खाका बनाएको हो । सो विषयमा प्र'हरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको छ । खाका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि १ लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म
रातको १२ बजे चिहा'न अर्थात मसा'न घा'टसम्म कोहि पुग्न सक्छ होला!? अनि म'रेको छ बर्ष बि'तेपछी उसको आ'त्मा फेरि भड्कि''एर हिड्छ होला त! कसैले पत्याउनै नसकिने घट'ना मोरङको बेलबारिमा घ'टेको छ । एका'एक सबै गाउँले बि'रामी पर्दै आत्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चि'न्तामा परेको छ । करिब छ बर्ष अगाडी मृ'त्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरा'मीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र'सित बनेको छ । बच्चादेखि वृद्ध सबै बि'रामी परेपछी धामी ले चि'न्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कु'टपि'ट समेत गरेका थिए । चार दिन चार रात नसुती धा'मी बसेर ढ्या'ङ्रो बजाए पछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दु'र्घ'टनामा नि'धन भएका जीवन राईको चि'हान ख'नेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुर'क्षा'कर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रात'को १२ बजे चिहा'न खनेर हेर्दा
काठमाडौं, बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको घोषणा गरेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार भोलि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता संगको एक भागमा मात्र रबि देखिने छन् ।भोलि प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै न्युज २४ टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिन लागेको उनले बताएका छन । भोलि प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै News 24 टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिदैछौ। यो साथ,सहयोग र अवसारकालागि सम्पुर्ण news 24 परिवार सहित अध्यक्ष आदरणीय अनिल जोशी ज्यु तथा निर्देशक अदिश जोशी ज्यु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। मलाई विश्वास गरि मार्गदर्शन समेत गर्नु हुने आदरणीय निर्मल राज पौडेल/निता पौडेल तथा सम्पुर्ण वेलकम ग्रुप प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु।